DH Flexo obibi | Na-eduzi flexo ígwè ígwè obibi akwụkwọ
Onye ọrụ Flexo Printing Machine
Igwe Na-emepụta Mgbanwe
Edebanye aha, paịlị akwụkwọ na nkwonkwo na-agbanwe
Izizi bidoro na 1996, DH Flexo Printing Technology Inc. aburula onye na-eme igwe na-ebi akwụkwọ akwụkwọ flexo na China.
Mgbe afọ 22 gasịrị, DH enweela ọganihu dị iche iche na-emepụta ọtụtụ nkwụsị nke ígwè obibi akwụkwọ na-ekpuchi ahịa nke labeling, na-ebugharị ihe a na-ebipụta nakwa na nke a na-ebipụta akwụkwọ nhazi. Ejiri igwe akụrụngwa a iji nye gi ọrụ kachasị ọrụ, àgwà kacha mma obibi na ihe onwunwe kachasị mma.
DH-OFEM bụ igwe ígwè ígwè obibi akwụkwọ nke oge a maka mmepụta nke nkwakọ ngwaahịa mgbanwe dị elu. Ọ na-ewuli elu na atụmatụ dị iche iche, site na nhọpụta nhọrọ nke ngwa ngwa.
DH-ROC bụ igwe eletrik na-arụ ọrụ na-enweghị atụ. Ọ bụ ngwa nhazi bụ 450m / min ma nakweere nkà na ụzụ kachasị dị ka teknụzụ nchapu, usoro nkwụnyeghị aka, ndepụta 100% àgwà nlele wdg.
DH-Kirin bụ igwe obibi akwụkwọ flexo modular emere iji nye ọrụ ọrụ ọsọ ọsọ. Ọ bụ akara ngosi kachasị mma gị & ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe. Ọ nwere ike na-onwem na ọtụtụ nhọrọ nkeji dị ka anwụ-ọnwụ, oyi zọ, lamination na sheeter wdg
DH-JL 2200mm ngwa ngwa ígwè obibi akwụkwọ sara mbara maka njikere
DH-FP dịka flexo pịa Uganda
DH-Jiaolong na-ebipụta akwụkwọ igwe na-egosi na Shanghai 2019 SINO.
DH-ROC DH-ROC dị ọhụrụ na-ebipụta akwụkwọ flexo nke enyere ndị ahịa
Ụdị DH ọhụrụ a na-eji ígwè ígwè obibi akwụkwọ arụ ọrụ na Turkey
Copyright © 2021 DH Flexo Printing - Okwu ederede WordPress site na GoDaddy